Banyere Anyị - Zhejiang Lanhine Medical Products Ltd.
Ahụike Lanhine, bidoro na 2007, ọkachasị na-etinye aka na nkpuchi ihu na mmepụta ọta ihu, ọkachasị bụrụ ezigbo ndị metụtara R&D na atụmatụ nke nchebe ume Ahụike Lanhine bụ ụlọ ọrụ CFDA, FDA na ISO & CE gbaara agbazi nke ezigbo ọgwụ eji arụ ọrụ.
Ahụike Lanhine nwetara ego mbụ na Shiva Medical na 2017 wee nweta ego nke abụọ site na Truliva Group na 2018, nke na-eme ka Lanhine Medical maka mmepe ọzọ. CEO nke Lanhine, Maazị Hawking Cao bụ otu n'ime dafter nke GB38880 maka Hymụaka Hygienic Face Masks. Na Lanhine mere nnukwu ọrụ na-egosi na o kwere omume nke nkpuchi nke ụmụaka ume ume nchebe.
Lanhine nwere ụlọ klas dị ọcha nke 100,000 na ụlọ nyocha 10,000, nke bụ otu n'ime ụlọ ọrụ ole na ole nwere teknụzụ kachasị elu yana ikike nrụpụta kachasị na ọta ihu na mkpuchi ihu. Ma ugbu a, ihe dị ka 90% nke ngwaahịa anyị na-ebupụ gaa mba Europe, Japan na mpaghara America wdg.
Nkebi nke akwụkwọ
ERlọ ọrụ ụlọ ọrụ